ME Launcher ကိုအခမဲ့ Download | APK ကို Android အတွက် Download
ပင်မစာမျက်နှာ » launchers » ME တင်ပေးသူ - Theme & 3D Wallpaper, Fast
ME တင်ပေးသူ - Theme & 3D Wallpaper, Fast APK ကို
ရရှိနိုင် ME Launcher ကို 2018 ဗားရှင်း! အန်းဒရွိုက်အခမဲ့အဘို့အအမှတ်တံဆိပ်အသစ်က Themes!ME တင်ပေးသူ - က Android, Google Play တွင်ထိပ် launcher apps များထဲကတစ်ခုများအတွက်အလွန်အမင်းစိတ်ကြိုက် launcher ။ အားလုံးတဦးတည်းအတွက် theme ဝေါလ်ပေပါပလီကေးရှင်းအဖြစ်ဖုန်းကို Optimizer!
အန်းဒရွိုက်အခမဲ့, အေးမြတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှနောက်ခံပုံများ, ဆောင်ပုဒ်နောက်ခံပုံများ, ထူးခြားတဲ့ခေါ်ဆိုခဖန်သားပြင်နှင့်ရယ်စရာရုပ်ပြောင်များအတွက် launcher themes များ ... Android အတွက် ME launcher launcher apps များအတွက်အများဆုံးအံ့သြဖွယ်အတွေ့အကြုံကို app ကိုတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ အန်းဒရွိုက်များအတွက်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလူကြိုက်များ launcher ပျော်ရွှင်ခံစားပါ!
ME ဖွင့်တင်ရဲ့အကောင်းဆုံး feature များ:
အန်းဒရွိုက်အခမဲ့✔️ Launcher ကို themes များ
✔️တိုက်ရိုက်နောက်ခံပုံများ & 3D ဆောင်ပုဒ်နောက်ခံပုံများ
✔️ချစ်စရာအီမိုဂျီ GIF များ & အပြုံးမျက်နှာ
✔️ဖုန်းအာနိသင်တိုးမြှင် & junk သန့်စင်
✔️ဘက်ထရီချွေတာ & မတ် charger ကို
✔️ဝှက် apps များ & app ကို Locker
- လူတစ်ဦးချင်း - ဆောင်ပုဒ်နောက်ခံပုံ apps များ၏အနှစ်သာရ
နောက်ခံများ: တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှနောက်ခံပုံများထောင်နှင့်ချီသော, 3D နောက်ခံပုံများနှင့်များစွာသောအမျိုးအစားထဲမှာ Home-screen ကိုဆောင်ပုဒ်နောက်ခံပုံများ။ ဆိုသော build-in နောက်ခံပုံဝစ်ဂျက်အတွက်ထိုကဲ့သို့သောရှုခင်း, ကားများ, တိရိစ္ဆာန်များ, အားကစားနှင့်ပိုပြီးအဖြစ်အမျိုးအစားကိုပုံမှန်မွမ်းမံမှုများနှင့်အတူရရှိနိုင်ပါသည်ပါဝင်သည်။ ငါတို့သည်လည်းတစ်ဦးကို Android စတိုင်ဆောင်ပုဒ်နောက်ခံပုံများရှိသည်။
themes: တစ်ဦးချင်းထူးခြားတဲ့ဒီဇိုင်နာများကဒီဇိုင်းခဲ့ပြီးသောအခမဲ့ Android ကိုအသုံးပြုသူများအတွက်စတိုင် Home-screen ကို themes များ Selected ။ အတော်များများကစတိုင်များသည့် ME တင်ပေးသူဆောင်ပုဒ်ဝစ်ဂျက်အတွက်အခမဲ့ရရှိနိုင်ကြသည်။
ခေါ်ရန်မျက်နှာပြင် Themes: အဝင်ခေါ်ဆိုမှုများအတွက် Fantastic ပြောင်းလဲနေသောဆိုးကျိုးများ။
ရုပ်ပြောင်: ချစ်စရာအီမိုဂျီ GIF များနှင့်သင့်စိတ်လှုပ်ရှားမှုအဘို့အအပြုံးမျက်နှာ၏ကြီးမားသောရွေးချယ်ရေး။
အကူးအပြောင်း Effect: နူးညံ့သိမ်မွေ့သောအကူးအပြောင်းအကျိုးသက်ရောက်မှု။
- ချောမွေ့ - ပရော်ဖက်ရှင်နယ်က Android Home-screen ကိုဖွင့်တင်ပေး apps များရပါမည်-ပါပြီ
1-Tap Boost: ထောက်လှမ်းရေးမှတ်ဉာဏ်တက်ကိုရှင်းလင်းခြင်းနှင့်တဦးတည်းကိုထိပုတ်ပါအတွက်ထိထိရောက်ရောက်မြန်နှုန်းမြှင့်တင်ရန်နောက်ခံ app များကိုရပ်လိုက်နိုင်သည်။
ဘက်ထရီ Saver: ဘက်ထရီ status ကို Analyze နဲ့ဘက်ထရီကိုကယ်တင်နှင့်ဘက်ထရီသက်တမ်းတိုးချဲ့ဖို့ဘက်ထရီဖျန် apps များရပ်တန့်။
junk Cleaner: Empty Junk ဖိုင်များကို။
+ Boost: အခမဲ့ဖုန်းနှင့်အာကာသလွှတ်လိုက်ပါ။
သတိပေးချက် Cleaner: အဝေးများလွန်းအကြောင်းကြားစာများအနေဖြင့်။
CPU ကို Cooler: သင်၏ဖုန်းကိုချ Cool ။
- ကို Safe - တစ်ဦးယုံကြည်စိတ်ချရသော privacy ကိုကိုယ်ရံတော်
Apps ကပ Hide: Home-screen ကနေပုဂ္ဂလိက app များကိုဖုံးကွယ်ရန်လက်ချောင်းနှစ်ချောင်းဖြင့်ပွတ်ဆွဲပါ။
App ကို Lock ကို: စကားဝှက်သို့မဟုတ်ပုံစံတွေနဲ့ apps များသော့ခတ်များက privacy ကိုကာကွယ်ပါ။
- အဆင်ပြေ - လွယ်ကူပြီးအလိုလိုသိ
quick ရှာရန်: ရှာဖွေရေးဘားဝင်ရောက်ဖို့ Home-screen ပေါ်မှာဆင်းပွတ်ဆွဲပါ။
အားလုံး Apps ကပ: ကိုလည်းရှုခင်းနှင့်ဒေါင်လိုက် mode ကိုထောက်ပံ့မယ့်ဦးစားပေးနိုင်ရန်အတွက်ဖော်ပြပေးအားလုံး apps များရှာပါ။
မျက်နှာပြင် Manager ကို & မတ် Folder ကို: Intelligence ကွဲပြားခြားနားသောဖိုလ်ဒါသို့ apps များ sorts ။
widgets: သင် launcher tools များထဲသို့ဝင်ရန်အဘို့အ Convenience ။
မဖတ်ရသေးသောကို Message: မဖတ်ရသေးသောမက်ဆေ့ခ်ျများအရေအတွက်အားလုံး apps တွေအတွက်အိုင်ကွန်တံဆိပ်များအပေါ်ပြသပါလိမ့်မယ်။
desktop က Settings: သင်၏ကိုယ်ပိုင် home screen က icon တွေကိုစိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်ပါ။
menu ကို: လူကြိုက်အများဆုံး features တွေထဲသို့ဝင်ရလွယ်ကူနည်းလမ်းဖြစ်သည်။
Entertainment က - သင့်အားလပ်ချိန်ကိုခံစား
အွန်လိုင်းအားကစားပြိုင်ပွဲ: သင်၏ရွေးချယ်မှုများအတွက် 20 + H5 အွန်လိုင်းဂိမ်း။
အင်္ဂလိပ်, အင်ဒိုနီးရှား, Español, Português, Русский, हिन्दी, Turk العربي, ภาษาไทย, Deutsch, Italiano, 한국어, Français, 日本語, TiếngViệt, 中文, 中文繁体
ME တင်ပေးသူ - Theme & 3D Wallpaper, Fast
20.15 ကို MB
ONE App ကို Essentials ။
နိုဝင်ဘာလ 17, 2018 မှာ 2: 31 ညနေ
ငါ၏အပြတင်းပေါက်မိုဘိုင်းဖုန်း၌ငါအဘယ်ကြောင့်ငါတဦးတည်း၌ငါ့အကြိုက်ဆုံး apps များ, အထူးသဖြင့် Apus Launcher, အော်ပရာ mini ကိုဒေါင်းလုဒ်မဆွဲကြဘူးလှည့်လည်။
အောက်တိုဘာလ 9, 2018 မှာ 4: 48 နံနက်
ငါရှိသောကြောင့်ငါ၏အဖိုင်တွေအတွက်ဂိမ်းကို download လုပ်ပါက dis app ကို download လုပ်မဖွစျနိုငျဟုစောင့်ရှောက်ဒေါင်းလုဒ်မဆွဲနိုင်ပါတယ်